फोेटो Archives -
नायिका प्रियंका चोपडाले बलिउडसँगै हलिउडमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरेकी छिन् । उनै, प्रियंका आफ्ना श्रीमान् निक जोनससँग रोमान्टिक तस्वीर सामाजिक संजालमा शेयर गर्न पछि पर्दिनन् । प्रियंकाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा केही तस्वीरहरु शेयर गरेकी छिन्, जसमा उनी आफ्ना श्रीमान् निकसँग रोमान्टिक अवतारमा देखिएकी छिन् । केही समय लण्डनमा बिताएपछि प्रियंका र निक अमेरिका फर्किएका छन् । उनीहरु, हालैमात्र बिलबोर्ड...
बलिउडका नायक संजय कपुरकी छोरी शनाया कपुर चाडै नै रंगिन दुनियाँमा पाइला राख्ने तयारीमा छिन् । यसका लागि उनले आफूलाई तयार अवस्थामा राखेकी छिन् । शनाया कपुरले बलिउडमा निर्माता करण जोहरको ब्यानरबाट डेब्यू गर्ने तयारी गरेकी हुन् । उनले, यो बर्ष नै बलिउडमा डेब्यू गर्ने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । उनै, शनाया बलिउडमा प्रवेश गर्नु अगाडि नै चर्चामा छिन् । शनाया आफ्नो बोल्ड छविका कारण चर्चामा छि...
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री मल्लिका शेरावतले बलिउडमा नातावाद र गुटबन्दीको ठूलो विभेद रहेको बताएकी छन् । उनले बलिउडमा जारी नातावाद कृपावादको विरोध पनि गरेकी छन् । बलिउडमा आफन्त कोही पनि नातेदार नभएका कारण हरेक चलचित्रका लागि अडिसन दिनुपरेको उनले बताएकी छन् । विगत १७ वर्षदेखि आफू बलिउडमा कार्यरत रहेको यी अभिनेत्रीको भनाइ छ । अहिले यी नायिकाले नयाँ चलचित्र ‘केआर आर क्या’मा नायिकाका लागि अडिसन दिएकी छ...
फ्लोरिडा । मेक्सिकोकी सुन्दरी एंड्रिया मेजाले मिस युनिभर्स २०२१ को ताज जितेकी छन् । आइतबार राति अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित हलिवुडको हार्ड रक होटल र क्यासिनोमा आयोजना गरिएको मिस युनिभर्सलको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा मेजाले विश्वका ७० देशका सुन्दरीलाई हराएर सो २६ वर्षीया मेजाले उपाधि चुमेकी हुन् । २०२० मा पहिलोपल्ट कोरोना भाइरस महामारीको कारण यो प्रतियोगिता रद्द गरिएको थियो । कोरोना केही साम्य भएको भन्द...
नितेश तिवारीको रामायणमा करिना कपुर वा दीपिका पादुकोण मध्य को बन्लान् सीता ?
फिल्म दंगलबाट चर्चामा आएका नितेश तिवारी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायणका लागि चर्चामा छन् । खबरका अनुसार यसमा ऋतिक रोशन र महेश बाबू मुख्य भूमिकामा हुनेछन् । साउथ सुपरस्टार प्रभासलाई रावणको भूमिकाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अब महिला कास्टका लागि पनि नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । रामायणमा कसले निभाउनेछ सीताको भूमिका ? पिपिङमुन डट कम का अनुसार करिना कपुर खान र दीपिका पादुकोणलाई सीताको भूमिकाम...
अनन्याको बलिउड यात्रा २ बर्ष पुरा
बलिउड नायिका अनन्या पाण्डेले चलचित्र ‘स्टूडेन्ट अफ दि इयर २’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी थिइन् । कलाकार चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्याको बलिउड यात्रा २ बर्ष पुरा भएको छ । अनन्याले २ बर्षमा बलिउडमा राम्रो छाप छाडेकी छिन् । आज उनको हातमा बलिउडका ठूला कम्पनीका चलचित्र छन् । भारतीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै अनन्याले आफ्नो लागि बलिउडको यात्र शानदार भएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले, आफ्नो सपना पुरा भएको बताएकी छि...
अभिनेत्री श्वेता नयाँ फिल्ममा अनबुन्धित
काठमाडौं । गत वर्ष सूर्य बोहराको चलचित्र हलो जिन्दगीको लन्डनमा छायांकन गरिरहँदा घाँटीमा ट्युमर देखिएपछि मुखमा प्यारालाइसिस समेत भयो । सो ट्युमर अप्रेसनका लागि अभिनेत्री श्वेता खड्काले सो फिल्मको काम छाड्नुपरेको थियो । जसमा उनको ठाउँमा अर्को नायिकालाई लिएर छायांकन गरिएको थियो । भारतको दिल्लीमा केही समयबसेर आफ्नो उपचार गराएकी अभिनेत्री श्वेता अहिले पूर्ण पमा ठीक भइसकेकी छन् । अब भने उनी फिल्ममा आ...